Abaalmarinta "Oscar of Kaabayaasha" waxay noqon doontaa Singapore - Geofumadas
Maarso, 2017 tabo cusub, Microstation-Bentley
Bentley Systems ayaa ku dhawaaqday baaq loogu talagalay soo gudbinta mashaariicda abaalmarinta Dhiibo 2017 at Horumarinta BIM ee Kaabayaasha.
Iyada oo diirada lagu saarayo horumarinta BIM-ga, Bentley Systems waxay ku talo jirtaa in ay meel dhigto baaqeeda sanadaha soo socda ee Bariga Dhexe; si sax ah sanadkan mid ka mid ah magaalooyinka kuwaas oo moodalkiisu sii kordhaayo qaabka caanka ah ee magaalada (#smartcity).
Bentley Systems, waa shirkad diirada saareysa bixinta nidaamyada software-ka ee muhiimka ah horumarinta kaabayaasha. ka Isku Day Rabshadaha 2017 waxaa lagu abaalmariyaa jury madaxbannaan oo ka kooban khabiiro ka socda qaybta, waxay aqoonsadaan mashaariicda kaabayaasha ah sida ku xusan horumarka BIM ee hagaajiya fulinta mashaariicda iyo / ama waxqabadka hantida. Waqtiga kama dambaysta ah ee soo gudbinta mashaariicda waa 1 ee Maajo ee 2017.
Abaalmarinta Dhiibo waa qayb muhiim u ah Shirka Sanad ku jirta Kaabayaasha 2017 ee Bentley, oo ka dhici doonta maalmaha 10, 11 iyo 12 bisha October ee Singapore, oo ku yaala Xarunta Shirarka Sands iyo Exhibition ee Marina Bay Sands, mid ka mid ah dhismooyinka ugu caansan Asia. Naqshadda dhismaha ee Marina Bay Sands waxaa bixiyay Arup oo ahaa guusha abaalmarinta Dhiibo 2010 loogu talagalay casriyeynta dhismaha qaabdhismeedka.
Dhammaan dadka isticmaala Bentley waxay soo bandhigi karaan mashaariicdooda Barnaamijka Abaalmarinta Dhiibo, iyada oo aan loo eegin wajiga uu mashruucu yahay: Hagaajinta / fikradda, qaabeynta, dhismaha ama hawlgalka. Saddexda Xulafadayaasha ayaa loo soo xulay qayb kasta oo ka mid ah Abaalmarinta Dhiibo Waxay ku guuleysan doonaan safar ay u tagaan Singapore si ay uga soo qayb galaan shirka, iyagoo marti ka ah Bentley Systems. Finalka ayaa soo bandhigi doona mashaariic ay ku jiraan wajiga ugu dambeeya ee Abaalmarinta Abaalmarinta Dhiibo ka hor garsoorayaasha, hoggaamiyeyaasha fikradaha warshadaha iyo in ka badan xubnaha 100 ee warbaahinta.
Abaalmarinta Dhiibo Waxay aqoonsan yihiin horumarka BIM ee qaybaha soo socda ee '17', oo qaar badan oo ka mid ah ku cusub yihiin sanadkaan, kuwaas oo diiradaydu ay tahay "Hawlgallada Degmooyinka" iyo "Injineerka Deegaanka":
Maaraynta iyo maaraynta dhulka
Awoodda iyo warshadaha dhirta
Tareenka iyo gaadiidka
Wadooyin iyo waddooyin
Waxqabadka hantida warshadaha iyo adeegyada dadweynaha
Gudbinta iyo qaybinta adeegyada dadweynaha
Dhirta biyaha iyo biyaha
Shirka ayaa sidoo kale ku jiri doona dhowr farsamooyin ganacsi oo cusub, oo ay ka mid yihiin:
Adeegyada bulshada iyo biyaha
Richard Ruth, oo ah madaxa badeecada iyo adeegga, Danfoss, ayaa faallo ka bixiyay: "Shirkadayadu waxay sharaf u tahay in lagu aqoonsado Abaalmarinta Dhiibo 2016 ee ku saabsan nalalka cusub ee waxqabadka hantida iyo maareynta tamarta. Labada shirkan iyo abaalmarintuba waxay na siiyeen fursado aad u fiican si ay ula kulmaan mashaariic farsamo iyo kuwo cusub oo adduunyo ah, sidoo kale waxaan rabaa in aan muujiyo dhacdooyinka Isgaadhsiinta bixinta shirka. Muuqaal kale oo aan ka helnay wax aad u faa'iido leh ayaa ah in mashruuceenna la qiimeeyay oo la barbardhigay kuwii ka soo jeeda jalayaashii kale iyo tartamayaasha suuqa. Waxaan rajeyneynaa in aan soo bandhigno mashaariic dhowr ah oo ku saabsan Abaalmarinta Dhiibo 2017 oo ka soo qayb gala shirweynaha Singapore! ".
Paul Baron, oo ah agaasimaha kooxda ganacsiga ee Pacific, GHD, ayaa yidhi: "Xitaa ka hor inta aan marxaladda la marin waxaan dareemay sida guusha. Xaqiiqada fudud ee kaqaybqaadashada munaasabadda iyo ku-hareeraysan musharaxiinta mashruuca ee aadka u fiican ayaa ahaa mid aad u dhiiri galinaya. Aad ayaanu ugu faraxsannahay in mashruucdayadu kor u qaadayso maareynta dhismaha ay ka mid tahay musharraxiinta abaalmarinta Dhiibo 2016 Waxaan sidoo kale ka mahadcelineynaa xiisaha ay soo bandhigtay warbaahinta adduunka oo dhan by shirkadeena iyo isticmaalka cusub ee technology. Mashruucan waxaa lagu aqoonsaday goobta adduunka ka hor inta aynaan asxaabteena, hoggaamiyeyaasha warshadaha iyo xubno ka tirsan warbaahinta waxay ahaayeen cashar is-hoosudhac ah. Waxaan rajeyneynaa inaan soo bandhigno mashaariic cusub sanadkan. "
Dhammaan musharaxiinta abaalmarinta Dhiibo Waxay helayaan aqoonsi muhiima oo muhiim ah oo ka dhexjira beesha caalamiga ah ee kaabayaasha. Barnaamijka Abaalmarinta Dhiibo, ka qaybgalayaashu waxay:
aqoonsi caalami ah Marka la soo bandhigayo mashaariicda kaabayaashaada ee Bentley Yearbook: Buug-gacmeedyada Infrastructure Yearbook, kaas oo loo qaybiyey qaab daabacan iyo qaab dijital ah 150.000 warbaahinta muhiimka ah, dawladaha iyo shakhsiyaadka caanka ah ee warshadaha caalamiga ah; Dhinaca kale, dhammaan guusha, guusha iyo mashaariicda kale ee la magacaabay ayaa lagu dari doonaa bogga internetka ee Bentley profiles;
xoojinta faa iidada tartanka adoo muujinaya macaamiisha, jiritaanka iyo kartida, qiimaha ay shirkadaha ay shirkadoodu keenaan mashaariicda ayadoo ay ugu wacan tahay horumarka cusub ee BIM;
inaad hesho warbaahin ballaaran oo warbaahin ah ee warbaahinta caalamiga ah iyo taageerada kooxda Bentley ee suuq-geynta iyo kor u qaadista mashaariicdooda.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka Abaalmarinta Dhiibo ama si aad u buuxiso foomka soo bandhigida, booqo Www.bentley.com/BeInspired.
Post Previous«Previous Awood-baahinta adeegyada diiwaan-gelinta-Cadastarada ee qaybta dadweynaha
Post Next System Camera codsanay-StreetviewNext »